Fiarandalamby Montreal tsara indrindra ho an'ny bisikileta
Ny Lalao Finaritra Mandrakizay an'i Montreal
Manana valan-javaboary maro be i Montreal. Fa iza moa no tsara indrindra ho an'ny bisikileta? Ny tanànan'i Montreal dia heverina ho tanàna mahafinaritra amin'ny bisikileta. Tsy ny teoria fotsiny. Ny tanàna dia manana valan-javaboary maro izay mamolavola ny tenany amin'ny fifaninanana roa. Raha eny, raha mikasa ny hanofa bisikileta ianao, dia manolotra soso-kevitr'izy ireo ny soso-kevitr'ireo mpandoa- bola ao Montreal .
Avy any ivelan'ny tanàna?
Ireo mpitsidika mitsidika an'i Montreal amin'ny volana mafana dia ho tia ny hijanona ao amin'ny fivondronamben'ny Eoropeana ao Montreal fahiny , ny atmosfera fetibe amin'ny distrikan'ny fialam-boly na ny lozam- pifaneraseran'ny trano fandraisam-bahiny ao Montreal .
Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Matias Garabedian
Parc La Fontaine tsy manana ny lalam-bisikileta lava indrindra ao Montréal. Midika izany, azonao atao ny mamakivaky azy manontolo mandritra ny dimy na folo minitra. Saingy, toy ny tohotra mahafinaritra ao afovoan-tananan'i Montreal's Plateau, ny fifindran'ny maso eo anelanelan'ny Point A sy ny Point B izay manararaotra ny fotoana fialan-tsasatra ary mijery ny olona.
Parc La Fontaine koa dia lavitra ny lalana bisikileta eo amin'ny Rachel Street izay ny aro loza lehibe indrindra ao amin'ny faritra Plateau. Ny valan-javaboahary dia vato iray ihany koa avy amin'ny mpijirika tsara indrindra ao an-tanàna ary Vélo Québec, fikambanana tsy mitady tombom-barotra natokana hampiroboroboana ny bisikileta any Québec.
Parc Mont Royal: Ny Quad Burn
Saripika mpampiasa Flickr Rajiv Patel
Raha mitady zavatra hafa ankoatra ny fitsangatsanganana alahady mahazatra, ny Parc Mont-Royal no lalana tokony haleha. Ampiasao ireo fiakarana mitam-piadiana sy ny fihenan-tsaka-pitenenana, ataovy azo antoka fa tsy hivezivezy ny mpitaingina ny gorodona. Mivezivezy amin'izy ireo ny tendrombohitra, indrindra ny Alahady .
Fotoana hentitra, mety ho afaka 20 ka hatramin'ny 40 minitra ny bisikileta amin'ny bisikileta. Ho avy ianao, manana karazana safidy fitarihana ianao: afaka manao tolotra ho an'ny Outremont, ny Plateau na eny afovoan-tanànan'i Montreal, izay tsy tena toerana mahafinaritra indrindra ho an'ny mpitaingina bisikileta, fa ianao kosa nahazo ilay sary.
Sary mihetsika / Getty Images
Ny antsasaky ny fialambolahy dia vao tonga any amin'ny Parc Jean-Drapeau . Indray mandeha dia afaka mandany telopolo minitra fotsiny ianao mba tsy hijanonana amin'ny bisikileta amin'ny alàlany, amin'ny fijerena ny toerana sy ny toetrany . Azonao atao ihany koa ny miasa amin'ny bisikileta mitaingina ny lalaon'ny Formula 1, ny Gilles Villeneuve. Ataovy azo antoka fa misokatra ho an'ny mpandeha bisikileta ny lalam-pifamoivoizana amin'ny andro efa azonao am-pilaminana amin'ny bisikileta. Ny làlana dia mihataka amin'ny hetsika manokana, anisan'izany ny Grand Prix Kanadiana .
Lakandranon'i Lachine: Ny Lalan'ny Sari-Tany
Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Alex Williams
Ny lakandranon'i Lachine dia mety tsy ho toy ny valan-javaboary ho azy fa ao anaty karazan-tsangambato. Afaka manomboka any amin'ny sisin'ny vavahadin'ny Old Port ianao dia afaka mandray anao na aiza na aiza manomboka amin'ny 40 minitra ka hatramin'ny adiny iray, mba handrakotra ny làlan'ny lakandranon'i Lachine 14,5 kilometra (9 kilaometatra). Manaova famandrihana matematika sy fiverenana mitsidika 29 km (18 km).
Azonao atao ihany koa ny miala ao Verdun mba hijery ireo tondra-drano any Parc des Rapides. Saingy ny làlana voavono dia mijery ny sari-tanin'ilay faritra ary manomana ny làlana alohan'ny handehanana. Manao fiara mahafinaritra izy io satria lavitra ny fanararaotan'ny lakandranon'i Lachine; Ny ankamaroan'ny mpitaingina bisikileta dia tsy mieritreritra ny handeha amin'izany. Saingy tokony hitazona ny làlana malaza ianao, misy sombin-dàlana lava sy mahavariana ao anatin'ilay lakandrano rehefa manosika ny andrefana ianao, ao anatin'izany ny 32nd avenue ao Lachine izay ahitana trano fisakafoanana an-kalamanjana, trano fisakafoanana ary toerana fisakafoanana. Mijanòna manodidina. Mitonia. Manana gilasy.
Parc de la Visitation: Ilay Avaratra Lehibe
Tsy ny làlana mahavariana indrindra no ahatongavana any amin'ny Parc nature de Île-de-la-Visitation, fa raha vantany vao tonga tany amin'ny lalana bisikilety ianao dia mahatsiaro ho mendrika ny olana. Misy fomba fijery mahafinaritra momba ny Faritra Avaratr'i North, tranokalam-pandaminana iray eo amin'ny toerana sy ny haavony handalinana, ary afaka miala ao Bistro des Moulins, iray amin'ireo tsara indrindra any Montreal .
Park Westmount: The Downtown Detour
Saripika mpampiasa Flickr colink.
Ny zavatra lazaina momba ny Parc La Fontaine dia mihatra eto. Ny Park Westmount dia tsy paradisa velively ho an'ny bisikileta, fa mahafinaritra ny toerana hamenoana azy. Eritrereto ny lozam-piaramanidina Westmount Greenhouses ho an'ny vatam-boninkazo sasantsasany - efa naverina indray izy ireo, nosakanana tsy tapaka ny fanavaozana azy ireo- ary raha afaka miatrika ny hantsana mihetsiketsika dia tokony mandeha bisikileta amin'ny Summit Park .
Parc Angrignon: miala ny lalam-barotra
Saripika mpisera Flickr abdallahh
Tsy any afovoan-tanàna no misy azy fa mora ny mandeha bisikileta na fiarabe fitateram-bahoaka, fanatanjahan-tena ambanin'ny 10 ka hatramin'ny 15 minitra avy any afovoan-tanàna. Ny Parc Angrignon dia manana sehatra 97 hektara (240 hektara) amin'ny toerana maitso, rakotry ny ala, dobo sy alamaka. Misy riandrano iray eto, misy fiaramanidina etsy sy eroa, afaka mandany andro manoritsoritra ny alahelon'ny renirano mitomany sy ny hazomalahelo marevaka. Toe-draharaha feno fiantohana bisikileta, mandinika ny fikarakarana sakafo atoandro ary boky tsara ho an'ny mpanjifa maharitra.
Bois de l'Île Bizard: Ny Dia Trip
Sary © Evelyn Reid
Raha tokony ho 60 kilaometatra kilometatra miala ny tanànan'i Montreal, dia afaka mamonjy bisikileta na aiza na aiza manomboka amin'ny adiny roa ka hatramin'ny antsasak'adiny mba hahatongavana any Bois de l'Île Bizard . Tsy misy zavatra toy izany ao Montreal, iray amin'ireo tora - pasika , ala sy honahona any Île Bizard, nosy iray any avaratra andrefana indrindra amin'ny nosy Montreal.
Manaova fitsangatsanganana ho an'ity iray ity ary na inona na inona ataonao, rehefa tonga any amin'ny trano fonenana ianao, mijery ny honahona, esory ny bisikao ary mandehana moramora. Izany dia miantoka ireo karazam-borona eny an-tanimbary dia mbola tsy voamarina araka izay tratra, izay miaro sy miaro ny fahamendrehan'ny marika. Ankoatr'izay, mety ho tianao ny hiala amin'ny bisikiletanao na dia eo aza ianao. Tsara tarehy izy izany.
Carifeesta Montreal 2017: Karaiba sy Fetibe Karibeana
Taom-baovao tao Montreal
Montreal Comiccon: 7 Jolay hatramin'ny 9 Jolay 2017
Ny Torolàlana ho an'ny Grown-Up mankany Montreal
Taom-pilaminana isan-taona any Phoenix
Zavatra fito no tokony hatao mandritra ny andron'ny Rainy San Francisco
Ireo toerana efatra lehibe indrindra any Costa Rica
Mipoaka ny fotona Milwaukee
Ny trano tsara indrindra ao amin'ny Universal Orlando
Seven Offbeat Walking Tours any Brooklyn
Bowie Baysox Stadium: Minor League Baseball, Bowie, MD
17 Zavatra Tsy Fantatrao Momba An'i Amerika Afovoany
Krismasy Krismasy any Roma
Miomàna ho sahiran-tsaina noho ity tanàna faran'izay kely fanta-daza ity